mercredi, 02 décembre 2015 14:22
Tetik'asa lalan-kely : Manomboka ny asa fanavaozana
Mitohy ny tetik'asa lalan-kely, anatin'izany ny fanatsarana ireo lalana simba eny amin'ny faritra iva. Mandray anjara sy manohy ny asany ihany koa ny eo anivon'ny fokontany.
BOTIKA Orange Ambolomadinika – Toamasina
mardi, 01 décembre 2015 20:02
Notafihin’ny jiolahy mitam-basy ny “BOTIKA Orange”, very ny 600 000 Ariary.
Ifanirea - Ikongo : Izy maty voatifitra, very ny 1,7 tapitrisa ariary sy volamena 20 grama
Raim-pianakaviana iray no maty tsy tra-drano notifirin’ny jiolahy nandritra ny fanafihana ny toeram-pivarotany tao Ifanirea, distrikan’Ikongo, faritra Vatovavy Fitovinany ny faran’ny herinandro teo. Lasan’ny jiolahy ny lelavola 1,7 tapitrisa ariary, volamena 20 grama sy entana saro-bidy hafa.
mardi, 01 décembre 2015 14:18
Sindikan'ny artista : Tsy manaiky ny hialàn'ny Talen'ny OMDA
Nampiantso ny sindikan'ny artista ny ministeran'ny kolontsaina. Ireo artista dia tsy manaiky ny anesorana ny Talen'ny OMDA ary milaza fa mety hisy ny filatsahana an-dalam-be raha toa ka mbola mitohy izao disadisa izao.
mardi, 01 décembre 2015 13:59
Ankatoky ny Noely
Efa manomboka hita eny an-tsena ireo ravaka sy kojakoja mahakasika ny fetin'ny Noely .
mardi, 01 décembre 2015 08:56
Sakaraha : Mpianaka avy nivarotra omby norobain’ny dahalo
Teny an-dalana izy mianaka no nifanehitra tamin’ny malaso mpanakan-dalana. Nalain’ireo dahalo dimy, nirongo basy ny iray, ny entana rehetra zakan’izy ireo tao anaty sarety. Mbola nentin’ireo mpandroba ihany koa ny ombin-tsarety roa. Iny hikasa hanohitra tamin’ny fakana an-keriny ny fananany iny ity tovolahy iray 21 taona no voafira famaky teo amin’ny lohany, raha voambana basy tsy afa-nihetsika ny rainy. Miady amin'ny fahafatesana ity zatovolahy ity amin'izao.
lundi, 30 novembre 2015 13:34
Mega don de sang
Hetsika faobe izay notanterahina manoloana ny tranombokim-pirenena eo Anosy ny alatsinainy 30 novambra 2015, marihina fa mitohy mandritra ny dimy andro misesy izao hetsika izao.
lundi, 30 novembre 2015 13:26
Fiaraha-miasa : 25 taona niara-niasa Stavanger sy Antsirabe
Nankalazaina tamin'ny fomba tsotra ny faha-25 taona ny fiaraha-miasa eo amin'ny kaominina Stavanger (Norvezy) sy ny tananan'Antsirabe, izay nivelatra tamina lafin-javatra maro izany. Isan'ny nisongadina tamin'izany ny lafiny tontolo iainana sy ny fanadiovana ny tanàna, ny lafiny demokrasia sy ny Fanjakana tsara tantana. Marihina fa mpirahavavy ireto kaominina roa ireto ary isan'ny nampiroborobo izany Rtoa Olga Ramalason, fony izy Ben'ny tananan'Antsirabe. Razanakolona Paul Ramasitera no Ben’ny tanànan’Antsirabe ankehitriny.
lundi, 30 novembre 2015 13:25
Hankalaza ny faha-dimapolo taonany ny Lycée Moderne Ampefiloha, maro ny hetsika entina hanatanterahina izany.
lundi, 30 novembre 2015 08:47
COP21 : Manan-danja ny toeran’i Afrika
Hisokatra anio any Paris ny andiany faha-21 amin’ny fihaonambe iraisam-pirenena handinihana sy handraisana fepetra amin’ny fiovaovan’ny toetr’andro vokatry ny fahasimban’ny tontolo iainana. 4% ny entona manimba ny sosona Ozona ihany no avy aty Afrika, nefa i Afrika no tena mizaka ny fahavoazana ateraky ny fiovaovan’ny toetr’andro. Ny 6 amin’ireo firenena 10 tena lasibatry ny fiovaovan’ny toetr’andro, na haintany na tondradrano dia aty Afrika avokoa. Hanan-danja araka izany ny toeran’i Afrika mandritra ity COP21 ity.
Page 617 sur 638